Wararka Maanta: Arbaco, May 2 , 2012-Taliye cusub oo Maanta si rasmi ah ula wareegay Hoggaanka Ciidamada Midowga Afrika (AMISOM) ee Soomaaliya ku sugan
Jen. Fred Mugisha oo ahaa taliyaha ciidamada AMISOM ayaa xilka ku wareejiyay taliyaha cusub, waxaana munaasabadda xil wareejinta goobjoog ka ahaa ergayga Midowga Afrika ee Soomaaliya, danjire Abuubakar Diarra iyo xiriiriyaha arrimaha dalka Soomaaliya ee Midowag Afrika, Mr. Sivuyile Bam.
"Gen. Gutti wuxuu hoggaamin doonaa ciidamada AMISOM kuwaasoo ku jira dagaal lagu doonayo in lagu soo celiyo nabad iyo kala dambeyn ay helaan shacabka Soomaaliyeed," ayuu yiri danjire Rodney Kiwa oo munaasabadda ka hadlay.
Danjiruhu wuxuu sheegay in AMISOM ay sii wadi doonto howgalka ay taageerayso beesha caalamka ee lagu soo celinayo nabadda Soomalaiya, isagoo sheegay inay u muuqato in xilli dhow ay Soomaaliya nabadi kusoo laabanayso.
Taliyaha cusub ee AMISOM oo muddo 26-sano ah ka tirsanaa ciidamada Uganda ayaa wixii maanta ka dambeeya wuxuu howlgelin doonaa ciidammo ka socda dalalka Kenya, Uganda, Burundi, Jabuuti iyo Sierra Leone.
Magacaabidda iyo la wareegista taliyaha cusub uu la wareegayo AMISOM ayaa waxay kusoo beegmaysaa xilli 100-askari oo ciidamada Midowga Afrika ka tirsan la geeyay degmada Baydhabo ee gobolka Bay halkaasoo noqonaysa meel ka baxsan Muqdisho oo ay AMISOM ka howlgasho tan iyo markii ay uu howlgalkoodu billowday sannadkii 2007.
Ciidamada AMISOM ayaa waxay Soomaaliya uga howgeli doonaan afar qaybood oo waaweyn, kuwaasoo ay ka kala howlgalayaan ciidamada ka socda dalalka kala duwan ee AMISOM ay ka kooban tahay.
Gen. Gutti ayaa sheegay in howlgalka AMISOM uu halkiisa kasii wadi doono uuna ku rajo weyn yahay in Soomaaliya oo dhan ay la wareegaan. "AMISOM horumar ayay ka sameyn doontaa sidii mustaqbalka Soomaaliya looga dhigi lahaa meel nabad ah," ayuu yiri taliyaha cusub ee AMISOM.
Howgalka AMISOM oo ka billowday Soomaaliya bishii Maarso ee sannadkii 2008 ayaa waxay ku guuleysteen markii ugu horresay inay la wareegaan Muqdisho iyagoo gacan siinaya ciidamada dowladda KMG ah ee Soomaaliya.